Image caption Mid ka mid ah dadkii qaraxa wax ku noqday oo la sido
Qaraxa loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu weeraray dhisme ay leeyihiin shaqaalaha safaaradda Turkiga ee magaalada Muqdisho waxaana wararka ay sheegayaan in ugu yaraantii saddex qof ay ku dhinteen oo mid kood ahaa qof watay dareeska ciidamada milatariga iyo qof shacaba oo wadada marayay.
Sidoo kale waxaa la arkayay gawaarida gurmadka ee caafimaadka turkiga oo daad gureynaya dhaawacyo shaqaalaha turkiga ka soo gaaray weerarka is qarxinta ah.
Lama oga khasaaraha dhabta ah ee gaaray shaqaalaha Turkiga ee deganaa gurigaasi haseyeeshee waxaa burburay wajiga hore ee dhismaha weerarka lagu qaaday, iyadoo durba ay halkaasi soo gaareen ilaaalada safaarada turkiga ay leeyihiin.
al-Shabaab ayaa sheegatay inay ka dambeysay weerarkan, iyada oo ku tilmaantay Turkiga inay yihiin kuwo xulafo la ah Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya.
Shabaabku waxa ay boggooda twitter-ka ku sheegteen inay dileen lix qof oo Turki ah oo saddex ka mid ah markii dambe ay dhaawac ugu dhinteen isbitaalka.